News Mansarovar » भारत र अमेरिका नजिकिँदा नेपाललाई के असर पर्छ ? भारत र अमेरिका नजिकिँदा नेपाललाई के असर पर्छ ? – News Mansarovar
काठमाडौं । पछिल्ला केही महिनायताका घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने चीनसँग सीमा विवाद बढेसँगै भारत अमेरिकासँग अलि नजिकिएको देखिन्छ । चीनले पनि सीमा विवादका सम्बन्धमा आफूसँगको बार्गेनिङमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुनका लागि भारत अमेरिकासँग नजिकिएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।
भारतको चीनसँगको सम्बन्ध चिसो हुँदै जाँदा र अमेरिकासँगको सहकार्य बढ्दै जाँदा नेपाललाई कस्तो असर गर्ला त रु
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तरराष्ट्र्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विभागका प्रोफेसर डा। खड्ग केसी अमेरिकी विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीको भारत भ्रमण, त्यहाँ भएको कुराकानी र भएका सम्झौता महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।
डा। केसीले चीनका बारेमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले पछिल्ला महिनामा दिएका अभिव्यक्ति निर्वाचन लक्षित भएको बताए । उनले भोलि अमेरिकाले नेपाललाई बीआरआईमा बस्न उचित छैन भन्ने सन्देश पनि लिएर आउन सक्ने बताए । ‘अहिले नयाँ शीतयुद्धको कुरा भइरहेको छ, तर पहिला शीतयुद्ध एकदमै जर्जर अवस्थामा रहँदा पनि हामीले असंलग्न नीति लिएका हौं, त्यसैले यो हाम्रा लागि धेरै ठूलो चिन्ताको विषय होइन ।’
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा। दिनेश भट्टराई भने चीनसँगको सम्बन्धमा भारत अमेरिकाजस्तो धेरै टाढा जान नसक्ने बताउँछन् । भट्टराई भारत र चीन एकदमै मिल्दा र उनीहरु वीचमा द्वन्द्व बढ्दा दुबै अवस्थामा नेपाललाई कूटनीति सञ्चालन गर्न एकदमै कठिन हुने बताउँछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका डा। भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने,‘सन् २०१५ मा भारत र चीनवीच राम्रो सम्बन्ध हुँदा नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी लिपुलेक सम्झौता भयो । त्यसैले उनीहरुका बीचमा राम्रो सम्बन्ध हुँदा पनि हामीलाई सहज छैन । त्यसैगरी उनीहरुका वीचमा द्वन्द्व भयो भने पनि अवस्था हाम्रा लागि सहज छैन ।
त्यसैगरी चीन र अमेरिकाको वीचमा द्वन्द्व बढ्दा पनि त्यो अवस्था नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्,‘ठूला मुलुकहरुवीचको गेम बढ्दै गइरहेको छ, त्यसैले नेपालका लागि आगामी दिनहरु निकै अप्ठ्यारा हुने देखिन्छ । अमेरिकाले भारतको आँखाबाट होइन, प्रत्यक्ष नै हेर्छौ भने पनि नेपाल नीतिमा अमेरिकाले भारतलाई आउटसोर्सिङ गरेको पाइन्छ ।’ नागरिक